Taliyaha Ciidamadda Xoogga Dalka oo sheegay inay Alshabaab kala Wareegen degaano dhowr ah – Radio Daljir
Taliyaha Ciidamadda Xoogga Dalka oo sheegay inay Alshabaab kala Wareegen degaano dhowr ah
Noofember 5, 2017 8:46 b 0
Abaanduulaha Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya Jen. Cabdullahi Cali Caanood ayaa sheegay in Ciidamada dowladda ay degaanno badan kala wareegeen Xarakada Al-shabaab.
Degaannada ay Ciidamada kala wareegeen Al-shabaab ayuu sheegay in ay dhacaan labada Gobol ee Shabeellaha hoose iyo Shabeellaha dhexe,iyada oo Al-shabaabka ay kala wareegeenna aadeen Sohdinta Gobollada Hiiraan iyo Baay.
Degaannada dhaca Labada Shabeelle ee ay Ciidamada dowladda la wareegeen ayuu ka sheegay in ay ka midyihiin Janbaluul iyo Baqdaad oo dhaca Shabeellaha hoose iyo Basra iyo Daniga Baallow uu dhaca Gobolka Shabeellaha dhexe.
Waxaa uu sheegay in Al-shabaab ay degaannadaas mar mar imaadaan islamarkaana ay dadka degaanka ka qaataan Lacago uu sheegay in ay ku noolaadaan kaddibna ku laabtaan degaannada ay ka duullaan tagaan.
Mid Kamid ah Xildhibaanada Mooshinka Kawadda Shariif Xasan oo ka hadlay Mooshinkooda halkuu marayo (dhegayso)
Madaxweynaha Puntland iyo Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya oo Yeeshay Kulan Casho Sharaf ah.